Urdolls मा वैकल्पिक भुक्तान विधि
Urdolls स्टोर द्वारा समर्थित भुक्तान विधि
मास्टरकार्ड विश्वभरका उपभोक्ताहरूका लागि अधिक सुविधाजनक र दक्ष वित्तीय भुक्तानी वातावरण प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ।
भिसाले भुक्तानी वातावरणको सुरक्षालाई सुरक्षित गर्दछ, प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्दछ, प्रविधि र उत्तम अभ्यासहरू मार्फत धोखाधडी रोक्दछ, र लेनदेन डाटा सुरक्षित गर्दछ ग्राहकहरूलाई सुरक्षित र भरपर्दो सामूहिक लेनदेन प्रशोधन (अधिकारपत्र, समाशोधन र समझौता) र मूल्यवर्धित सेवाहरू प्रदान गर्न।
3.JCB क्रेडिट कार्ड
JCB क्रेडिट कार्डको मुख्यालय जापानमा छ र २२ देश र क्षेत्रहरुमा १. 1.05 मिलियन भन्दा बढी ग्राहकहरु छन्। JCB जापानको अग्रणी र केवल अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी ब्रान्ड हो र जापान र एशियामा व्यापक मान्यता प्राप्त छ।
सुरक्षित, विकेन्द्रीकृत ब्लकचेन-आधारित नेटवर्कमा सफलतापूर्वक लेनदेन रेकर्ड गर्न बिटकइन पहिलो क्रिप्टोकरन्सी थियो। २०० se को शुरुमा यसको छद्म निर्माता सतोशी नाकामोटो द्वारा शुरू गरिएको, बिटकॉइन मार्केट क्यापिटलाइजेशन र यसको ब्लकचेनमा भण्डारण गरिएको डाटाको मात्रा द्वारा मापन गरिएको सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टोकरन्सी हो।
१ custom अनुकूलन विवरणहरू छनौट गर्नुहोस्।
२ custom अनुकूलन विकल्प चयन गरेपछि, क्लिक गर्नुहोस् कार्डमा थप्नुहोस्.
、 शपिंग कार्टमा जानुहोस्, जानकारीको पुष्टि गर्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् जाँच गर्नुहोस्.
、 Your कृपया तपाईंको ठेगाना जानकारी सहि भर्नुहोस् (गलत देश, क्षेत्र, वा हुलाकी कोड भरे पछि अर्को चरणमा पुग्न नसक्ने परिणाम हुन सक्छ)। थिच्नुस समीक्षा अर्डर गर्न अगाडि बढ्नुहोस् पुष्टिकरण पछि। कृपया निश्चित हुनुहोस् कि तपाईका सबै जानकारीहरु सुरक्षित गुडियामा सुरक्षित तपाई सम्म पुग्नको लागि मात्र हो। हामी ग्यारेन्टी दिन्छौं कि यो खुलासा गरिएको छैन वा व्यावसायिक उद्देश्यको लागि प्रयोग गरिने छैन।
、 मा क्लिक गर्नुहोस् भुक्तानी गर्न अगाडि बढ्नुहोस् पुष्टिकरण पछि।
、 Payment भुक्तानी विधि छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई उपयुक्त छ। त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस् आदेश पेश गर्नुहोस्.
、 、 कृपया तपाईंको अर्डर पुष्टि गर्नुहोस् र भुक्तानी पूरा गर्नुहोस्। (यदि त्यहाँ भुक्तानी असफल भएमा, कृपया केहि पटक प्रयास गर्नुहोस् वा हामीद्वारा प्रदान गरिएको अर्को भुक्तानी विधि छनौट गर्नुहोस्। यदि तपाईं अझै पनी आफ्नो समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्न भने, कृपया हामीलाई service@urdolls.com मा सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई २ 24 घण्टा भित्र जवाफ दिनेछौं।)